Kwado azụmahịa gị maka Vidio ndị ọkachamara | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ ọnwa ole na ole gara aga iji nweta ụfọdụ ngwa vidiyo DK New Media. Mgbe anyị nwere ụlọ ọrụ vidiyo dị egwu na anyị emeela ihe dị elu, site n'oge ruo n'oge, anyị na-achọpụta na anyị chọrọ ịdekọ ma gwakọta vidiyo yana - ma anyị chọrọ ka ọ dị ka ọkachamara. Onye na-ese ihe nkiri anyị makwaara nke ọma na ịgwakọta vidiyo na ọdịyo ka anyị wee rụọ ọrụ n'ịchọta ụfọdụ akụrụngwa ịmalite.
Buru n'uche na anyị anaghị amalite ọkachamara video gị n'ụlọnga, anyị na-na-amụ ihe na-achọghị imebi akụ na-amalite. Anyị chọrọ nnukwu akụrụngwa, mana achọghị ihe kacha mma. Anyị achọghịkwa akụrụngwa crappy. Anyị kpọkwara ndị otu vidiyo ahụ Kpọmkwem Ngwaọrụ, bụ ndị na-ewepụta vidiyo na mgbe niile.
Nchịkọta akụrụngwa vidiyo bụ nke igwefoto DSLR, igwe okwu lavalier, onye na-edekọ ọtụtụ egwuregwu na ọkụ. Nwere ike tinye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana anyị anaghị eme atụmatụ ịme akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a bụ vidiyo site na DSLRHD nke ahụ na-enye ụfọdụ nghọta maka ịhọrọ igwe okwu kwesịrị ekwesị na ndekọ ndekọ - igodo iji dekọọ vidiyo dị ukwuu.
Akụrụngwa vidiyo maka Azụmaahịa Gị
Nke a bụ mmebi nke ndepụta ngwa ọrụ yana ọnụahịa efu:
Camera - Canon EOS nnupụisi T3 12.2 MP CMOS Digital SLR Camera na EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II Zooms Lens & EF 75-300mm f / 4-5.6 III Telephoto Zoom Lens + 10pc Bundle 16GB Deluxe Ngwa Kit. Ekwadoro mbugharị telephoto ka ị wee nwee ezigbo omimi na foto gị site na itinye uche nke ukwuu na onye ahụ ma daa azụ. Nwere ike ịzụta igwe foto dị oke ọnụ karịa nke nwere ọtụtụ atụmatụ karịa… mana nke a bụ ihe dị mkpa anyị chọrọ ịmalite. Ọnụ ego dị ihe dị ka $ 550.
Microphones - Sennheiser EW 112P G3-A usoro EW zuru oke. Ruo ugbu a, ọ bụ ebe a ka ọtụtụ elebara anya na ndị na-ese vidio anyị ma dọọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ịda. Ndị Sennheisers na-adịgide adịgide - dị ezigbo mkpa ka ha ghara ngwugwu, tinye ndị mmadụ ma wepu ya na ndị mmadụ oge ọ bụla ị na-edekọ. Nakwa, nkwenye zuru oke bụ na ha dị ịtụnanya na ha nwere ike ịnaghachi nzaghachi na mkpọtụ. Akwụ ụgwọ maka nke ọ bụla bụ $ 630! Ouch.
Onye na-edekọ - Mbugharị H2n Handy Digital Multitrack Recorder Bundle. Nke a nwekwara ezigbo setlọ igwe okwu stereo dị na ihe omume ịchọrọ ha. Efu bụ $ 200.
Ọkụ - CowboyStudio 2275 Watt Digital Video Na-aga n'ihu Softbox Lighting Kit / Ọganihu Set. Ọ bụ ezie na ọkụ ọkụ na-enye ọtụtụ granularity na anaghị ewe ohere, ha dị oke ọnụ (ihe dị ka $ 1,600). Ekwesiri ka elebara ihe nlere nke a anya nke oma ma o gha enye gi oku ichoro vidiyo di nma. I nwere ike chọọ mgbe ụfọdụ vidiyo na ọnyịnye! Efu bụ $ 220
Biko buru n’uche na anaghị m edenwu ihe a ka ọkachamara n’ozi vidiyo. Anyị nwere ike ịkwalite akụrụngwa anyị ma emechaa… Ọkụ ọkụ nwere ike ịbụ mbido nke mbụ yana, dị ka ndị mmebe anyị bụ DSLR… eleghị anya igwefoto.
Ọzọkwa, ebumnuche anyị ebe a abụghị ịzụta nke kacha mma… ọ bụ ịzụta ngwa ngwa nwere ike inyere anyị aka ịmepụta vidiyo ọkachamara na enweghị akụ. Ntọala a dum gbasara $ 1,600 (agunyeghi ụtụ isi na mbupu).
Ngosi: niile njikọ ebe a na-eji anyị Amazon Mgbakwunye njikọ.
Ekwenyesiri m ike na post a ga-enwe ọtụtụ echiche! Kedu nke gị?
Tags: 1080pazụmahịa vidiyondị nnupụisiUchechukwuUgborodslr hdigwe na-anụ ọkụihe ọkụokwumulti-track edekọnwachukwuvideo ọkụ
Ihe mere weebụsaịtị RFPs anaghị arụ ọrụ